Thwebula Instagram 9.7 – Vessoft
Inethiwekhi Yokuxhumana, Isithombe
Instagram – a isofthiwe ethandwa ukucubungula izithombe izici yokuxhumana. Isofthiwe kuhlanganisa ezihlukahlukene imiphumela image nokuhlunga eyenza ukushintsha saturation, umehluko, izithunzi, ukujula, zilethwa ukutsheka shift of izithombe njll Instagram ikuvumela ukubeka izithombe in page siqu bese wengeza imibono noma links. Isofthiwe kwenza ukucinga bese ubhalisele amakhasi zabanye abasebenzisi lokubona, ukuphawula noma like izithombe zabo. Instagram futhi baxhumana zokuxhumana zenhlalo Facebook, Twitter and Tumblr.
Ukubekwa Kalula of izithombe
A set esikhulu imiphumela nokuhlunga
Ukuxhumana nge popular zokuxhumana nabantu
Amazwana on Instagram:
Instagram Ahlobene software:
Inethiwekhi Yokuxhumana Ithuluzi microblog futhi umyalezo exchange inethiwekhi ethandwayo emphakathini. Isofthiwe ikuvumela ukubuka futhi ukuphawula amanothi.
English, Français, Español, Deutsch... Facebook 101.0.0.18
Inethiwekhi Yokuxhumana Isicelo free of the izingosi zokuxhumana nabantu ezidumile. Isofthiwe kwenza ukubuka futhi adale okuqukethwe ezahlukene okunikwa yokuxhumana.
English, Afrikaans, Français, Español... Imgur 2.4.6.205
Inethiwekhi Yokuxhumana The yokuxhumana eligxile isihloko kusungulwa othintana ibhizinisi. Isofthiwe kwenza ukuba ubuyekeze izinkampani ezahlukene global kanye nabameli babo.
English, Afrikaans, Français, Español... WhatsApp Messenger 2.16.337
Inethiwekhi Yokuxhumana The popular Ingosi yokuxhumana nabantu yenza ukuxhumana emhlabeni wonke futhi kusekela imidlalo ekhethekile ezikhuthaza abantu obajwayele abasebenzisi.
English, Українська, Français, Español... KMPlayer 2.2.2
Abadlali Media Omunye wabadlali abadumile kakhulu ukudlala amafayela emidya. Isofthiwe anhlobonhlobo izilungiselelo for izinga ukudlala inqwaba soxhumanoningi takhiwo.
Chat The khulula zokuxhumana Imenenja esiklanyelwe by inxanxathela yokuxhumana VKontakte. Isofthiwe isekela izindinganiso zokuziphatha ezinokwethenjelwa ukubethela uhlelo imiyalezo ephephile.
English, Español, Deutsch, Português... All-In-One Toolbox 5.3.5